DEG DEG: Musharax Qudbad ka Horjeedin Lahaa Baarlamaanka oo Is Casilay – Puntland Voice
DEG DEG: Musharax Qudbad ka Horjeedin Lahaa Baarlamaanka oo Is Casilay
February 4, 2017 7:08 am Views: 23
Mid kamid ah Musharixiinta maanta lagu waday in uu baarlamaanka ka horjeediyo khudbadiisa musharaxnimo ayaa goordhow is casilay.
Musharax Eng. Cabdullaahi Cali Xasan oo buuxiyay Shuruduudihii madaxweyninimo ayaa ku dhawaaqay in uu ka tanaasulay musharaxnimadiisii.
UJEEDO: KA TANAASULID MUSHARAXNIMADA JAGADA MADAXWEYNAHA SOOMAALIYA.
BISMILLAHI RAXMAANI RAXIIM:
Anigaoo ah Eng. Cabdullaahi Cali Xasan waxaan Go’aan ku gaaray in aan ka tanaasulo u tartanka jagada Madaxweynimo ee Soomaaliya maanta oo taariikhdu tahay 04.02.2017, tanaaulkeyga musharaxnimada Madaxweynaha wiuxuu ku saleysanyahay sababaha hoos ku qoran: